Paartilee Siyaasaa: Dhimmi Obbo Getaachoo Asaffaa dafee furamuu baannaan biyyaaf yaaddoodha - BBC News Afaan Oromoo
Hayyoonniifi gaggeesitoonni paartilee siyaasaa dhimmi Hoogganaan Tajaajila Odeeffannoofi Tikaa Biyyaalessaa Duraanii Obbo Geetaachoo Asaffaa dafee furmaata hin argatu taanaan biyyaaf yaaddoo guddaadha jdhan.
Qondaaltoota motummaa yakka dhiittaa mirga dhala namaafi malaammaltummaan shakkaman keessaa tokko kan ta'an Obbo Geetaachoon hanga yoonaatti to'annoo seeraa jala ooluu hin dandeenye.
Mootummaan Federaalaa dhimmicha harkaa qabus gara naanoo Tigiraayi deemee nama kana seeraan to'achuuf naannicharraa tumsa argachaa akka hin jirre ibseera.
'Dogongoraa uumame tooftaa dogoongooraan hiikuuf yaalutu ABO adda facaase'
M/J Kinfeefi shakkamtoonni biroo mana murtiitti maal jedhan?
Hayyoonni fi hooggantoonni paartilee siyaasaa dhimmi kun dafee furmaata yoo hin argatu taanaan biyya kanaaf yaaddoo guddaadha jedhan.
Dura Taa'aa Paartii MEDREK kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa, biyyi kun mootummaa tokko jalatti utuu bultuu nama yakkaan shakkite tokko seera jala oolchuuf atakaaroo haganaa keessa seenuun ishee yaaddessaadha jedhu.
"Naannoon Tigiraayi Geetaachoo Asaffaa dabarsee seeraaf hin ennu taanaan mootummaa lamatu biyyi tokko bulcha jechuudha," jedhan.
Kanaafuu, dabarsanii yoo kennan gaarii akka ta'e kaasanii, ajaja Abbaan Alangaa Waliigalaa federaalaa baase hin fudhadhu jechuun mootummaa biraa uumuudha jedhan Dr. Mararaan.
Akka isaan jedhanitti kun Tigiraayis ta'e Itoophiyaa rakkoo biraa keessa galcha. "Dhaddacha bilisaarratti dhimmi kun akka ilaalamu gaafachuudhallee malee furmaata kan ta'u, dabarsee hin kennuun jechuun balaa qaba," jechuun akeekkachiisan.
Kun gara mootummaa lama ta'uutti deema kan jedhan Dr. Mararaan, jireenya lammiilee Itiyoophiyaa warra kaaniifillee rakkoo guddadha waan ta'eef naannoon Tigiraayi osoo dhimma kanarratti tumsinee ni filatama jedha.
Dhimma shakkamaa dabarsanii kennuurratti xiyyeeffachuun dura waldhabdee paartilee, akkasumas naannoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiruu furuu wayya jedhan Yuuniversitii Maqaleetti Barsiisaa Seeraa kan ta'an Dr. Mangistuu Arrafaayineet ammoo.
Akka Dr. Mangistuun jedhanitti, biyya tokko dhiisiitii biyyoonni adda addaallee nama badii balleesse dabarsanii kennaa jiru. Haata'u malee, garuu biyya kana keessa rakkoo siyaasaa guddaatu jira.
Paartii ADWUI keessa mataasaa walqoqqoodiinsa guddaatu jira. "Paartilee ADWUI uuman keessaa tokko qofa adda baasanii qoollifachuun hawaasa keessattillee qoqqoodiinsa uumeera. Seerri jedhamullee hawaasaan waan fudhatamu natti hin fakkaatu."
Itoophiyaa keessa yeroo ammaa olaantummaan seeraa hin jiru kan jedhan Dr. Mangistuun, Mootummaan Federaalaa aangoo harkaa qabutti fayyadamee haaloo bahuutti jiras jedha.
"Nama yakkaan shakkame eenyumtuu da'oo ta'uufii hin barbaadu, hin danda'amus. Rakkoon amma jiru olaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha seeraan ala deemamaa jira.''
Gama biraatiin Pirezidaantii Paartii Dimokraatawaa Itoophiyaa kan turan Obbo Mushee Sammuu, dhimmi nama yakkaan shakkamee tokkoo hawaasa bal'aatti maxxansuun golgaa godhatanii atakaaroo siyaasaa biraa keessa galuun biyya gara hin taaneetti akka oofu dubbatan.
Obbo Musheen dhimmoota Obbo Geetaachoon maaliif Tigiraayitti akka maxxanuuf ka'umsa ta'e? Akkasumas Naannoon Tigiraay mootummaa Federaalaa waliin waldhabee dabarsee hin kennu jechuurra maaliif ga'e? Gaaffileen jedhan gadi taa'anii mari'atanii deebisuudha furmaati jedhan.
Dhimmichi kan uummata Tigiraayirratti xiyyeeffatedha kan jedhu yoo ta'ellee, waliin dubbachuun furuu qabu kan jedhan Obbo Musheen, kanaan achi dhimma kana akka seeraan qabameetti ilaaluurra golgaa hawaasaa fayyadamuun akka komii hawaasaatti fayyadamuun hin barbaachisu jedhu.
"Dhimmi nama tokkoo maaliif hawaasa bal'aatti maxxanfama. Biyya tokko, uummata tokkoodha kan jiru.''
''Biyyaaf yaaddoo yoo ta'e mootummaa hidhamuun nama tokkoo ykn namoota muraasaa garaa garummaa guddaa fudu hin qabu''
Biyyittii keessa namootni yakka hojjetan hedduun hiikamaniiru. Mootummaa irratti waraana banaa warri ture iyyuu biyya biraadhaa waamamanii galaniiru. Karaa tokko araara wayya jechaa karaa biraa immoo namoota kaan hidhuun maal jechuudha? jechuun gaaffii kaasu.
Dabalataan ''anaaf waanti hundinuu seeraan gadii dha. Dursi kennamuufiin kan qabu ol'aantummaa seeraa irratti wal amanuudha'' jedhan.
Mootummaan federaalaa nama tokko yakkaan shakkee himata yoo irratti bane, akkataadhuma namootni kaan seera fuulduratti ilaalamanitti mana murtii bilisa tahetti dhimmi isaanii ilaalamuu qaba jedhan.
Haa tahu malee mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa isaa hammam bahateera kan jedhu jalqaba ilaalamuu qaba jedhan.
Karaa miidiyaalee hawwaasaa Obbo Geetaachoo Asaffaa dabarfamanii akka kennamaniif uummatni Tigiraay ni morma jedhamus, Obbo Geetaachoon ajandaa uummata Tigiraay mitii jedhu dura taa'aan paartii mormituu Arenaa Obbo Abrahaa Dastaa.
Kanaafis akka ka'umsaatti kan kaasan, yeroo Obbo Geetaachoon taaayitaa isaanii irraa ka'anii gara Tigiraay dhaqan gaaffiin akkasii ka'uu dhabuu isaati.
''Uummatni Tigiraay dhimma nama dhuunfaa irratti ejjennoo tokko qaba jedhee hin yaadu. Obbo Geetaachoon dabarfamee kennamuu fi kennamuu dhiisuun mo'amuu ykn mo'amuu dhabuu ABUT fi siyaasa saba irratti xiyyeeffate godhamee waan ilaalameefi'' jedhan.
Paartiin isaanii Arenaan, Obbo Getaachoon dabarfamanii kennamuu qabu jettanii amantuu gaaffii jedhu ilaalchisees; kun dhimma ADWUIti malee kan keenya miti jedhaniiru.
Waliin tahanii gadi taa'anii mari'achuun waan irratti waliigalu danda'anii ture kan jedhan abbaa siyaasaa kun, amma wanti uumame paartileen ADWUI wal qoqoodaa jiraachuu isaaniiti jedhan Obbo Abrahaan.
Gama kanaanis yaadni Oobbo Abrahaa yaada Obbo Mushee irraa adda miti. Lamaanuu waliin mari'atanii dhimmichaaf furmaata kennuu qabu jedhanii amanu.
Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Biraanu Tsaggaayees, Obbo Geetaachoo qabuuf nama biraa ajjeesuun nurra hin jiraatu jedhanii ture. Obbo Abrahaanis mootummaan Obbo Geetaachoo qabuuf humna fayyadamuu hin qabu jedhanii amanu.
''Nama tokko qabuuf mootummaan waraana fayyadama jedhee hin yaadu. Siyaasa isaas sirreeffachuu jecha callisa filata jedheen yaada. Naannoon Tigiraayis nageenya naannoo isaa fi uummata isaa ni eega jedheen amana,'' jedhan Obbo Abrahaan.
Abbaan Alangaa Federaalaas Obbo Geetachoon to'annoo jala akka oolaniif ajajani bahuu himuunsaanii ni yaadatama.
Shakkamtoonni malaamaltummaafi mirgoota namaa sarbuun himataman mana murtiitti dhiyaataniiru
Koronaavaayirasiin addunyaarratti nama 720,000 qabe, 34,000 ajjeese